ဆိုးသွမ်း: ခင်ဗျားရဲ့ ခံစားချက်ကိုပြောပြဖို့ ....ဘယ်တော့မှ မကြောက်နဲ့
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:06 AM
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာ လူတွေက ငယ်ငယ်တုန်းက မှ မဟုတ်ဘူး။ ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်း ကြုံတွေ့ရတယ်ဗျ။ အဓိကတော့ ငဲ့ညှာစဉ်းစားမှုကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်
ဟုတ်တယ် ဘာမှန်းမသိဘဲ ကြောက်လို့ ပြောမထွက်တာနဲ့ အားနာလို့ပြောမထွက်တာနဲ့ နောက်ဆုံ့းမှာ ကိုယ်ဘဲ ခံလိုက်ရတာပါ။
ညက မြင်လိုက်တယ်။ တိတ်တိတ်လာသွားတယ် ဆိုလို့မနူတ်ဆက်တော့ဘူး.
ဒီကပိုစ်လာဖတ်ရင်းနဲ့ စဥ်းစားသွားသေးတယ်။ ဆရာဝန် တွေ အကြောင်းေ၇းတာ တိုက်ဆိုင်သွားတယ် ဆိုပြီး မတိုင်ပင်ဘဲနဲ့၊
တို့ပိုစ် ကို လူသိတ်မကြိူက်ပေမဲ့ တို့အားရတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်သလိုပေါ့ အလှကား မရိုက်ဘဲနဲ့ သဘာဝ ကားကို ရိုက်ပြ လိုက်ရသလိုမျိူး အနုပညာပါတယ် လို့ ကိုင်္ယကိုကိုယ်ခံစားမီသွားတယ် :P
ဆိုးသွမ်းရေ .. .တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ် …
မနေ့ညက ကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက ဆောင်းပါးတွေကို သိပ်သဘောကျခဲ့လို့
အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲက တချို့ကို သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှဖို့ ပို့စ်အဖြစ်တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးနေတာ … ဆောင်းပါးကရှည်တော့ မရိုက်ဖြစ်သေးဘူး … ခု ဒီဘလော့ကိုရောက်တော့လဲ ကြောက်စိတ် တွေအကြောင်းရေးထားတယ် …. အစ်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေက ကြောက်စိတ်ဆိုတာနဲ့ ရိုသေသမှု့ဆိုတာနဲ့ကို ရောထွေးပြီး အရာတော်တော်များများကို ခေါင်းငုံ့ခံတတ်တာ အရိုးစွဲနေကြပြီလေ …
တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ပေါ်နေတတ်တာ သဘာဝလား မသိ၊
စာအုပ်ရက်ကျော်တိုးတွေတက်တဲ့ ဒုက္ခ ခံဖူးတယ်
ပိုစ့်လေးထဲက အတိုင်းကွက်တိပါပဲ ...
ပြန်တောင် လွမ်းသွားတယ်ဗျာ ... အဲ ကာလကို ... ။